9 / 11 အမှတ်တရ နှင့် အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာ, စက်တင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့ , အကြမ်းဖက်မှုကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # လောကဓံ ကြောင့် အရောင်ပြောင်းခြင်း
# ဆပွတ်တစ်လုံး လိုရာသုံး . . . »
#9/ 11 အမှတ်တရ နှင့် အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာPublished September 12, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
အခုတော့လည်း ဒီဖြစ်ရပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာ (၁၀)နှစ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် “အိုစမာဘင်လာဒင်” ဟာလည်း ယခုနှစ် မေလဆန်းပိုင်းမှာ အသေဖမ်းမိသွားပါပြီ။ သိပ်ကြာခင်မှာဘဲ ဒုတိယ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို အသေ ဖမ်းမိပြန်ပါတယ်။ အယ်ခိုင်းဒါး အဖွဲ့ကြီးဟာ သေသူသေ ၊ အဖမ်းခံသူ အဖမ်းခံရနဲ့ ပြိုကွဲပျက်စီးလုလုနီးနီး ရှိနေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ဒီလို “ဘင်လာဒင်” ခေါင်းဆောင်တဲ့ “အယ်ခိုင်းဒါး” အဖွဲ့ကြီးကို လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြိုဖျက်ခဲ့ရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အားလုံးလည်း သိကြပါတယ်။ အမေရိကန် အစိုးရဟာ ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်းများစွာ သုံးစွဲပြီး၊ ငွေအင်အား ၊ လူအင်အား ၊ နည်းပညာအင်အားတွေနဲ့ ဖြိုဖျက်ခဲ့ရတာပါ။ နောက်ပြီး (၁၀)နှစ် နီးပါးလောက်ကို အချိန်ယူ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။
ထားပါတော့လေ။ အခုဟာက သမိုင်းကြောင်းကို ရေးမှာ မဟုတ်ဘဲ ဗေဒင်အကြောင်းကို ရေးမှာ ဖြစ်လို့ ဒီအကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်ကြီးကို ဦးဆောင်သူ “အိုစမာဘင်လာဒင်” ရယ် ၊ အဲဒီ အချိန်က အမေရိကန် သမ္မတဖြစ်နေတဲ့ “ဂျော့ ဘွတ်ရှ်” ရယ် ၊ နောက်ဆုံး “ဘင်လာဒင်” ကို သုတ်သင်နိုင်ခဲ့တဲ့ “ဘားရတ် အိုဘားမား” ရယ် . . . သူတို့ (၃)ဦးရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်တွေကို လေ့လာ ကြည့်လိုက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတစ်ခုကို သွားတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျ။ ဒါလေးကို ပြန်ပြီး ဖောက်သည်ချချင်တာပါ။ ဒါက ဒီဆောင်းပါးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဘဲ 2001 ခုနှစ်ဆန်းမှာ ဂျော့ဘွတ်ရ်ှက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမ္မတဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာဘဲ 9/11 အကြမ်းဖက်မှုကြီး ဖြစ်လာတယ်။ ဂျော့ဘွတ်ရ်ှဟာ သူ့ရဲ့ သမ္မတလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်းများစွာ သုံးစွဲပြီး “ဘင်လာဒင်” ကို အသေအကြေ လိုက်ဖမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မမိဘူး။ ဘင်လာဒင် ဘယ်မှာ နေမှန်းတောင်မှ သေချာ မသိခဲ့ရပါဘူး။ သူ့ရဲ့ သမ္မတသက်တမ်း (၂)ကြိမ်သာ ပြီးသွားတယ်။ လုံးဝမမိခဲ့ဘူးနော်။
နောက် 2009 ခုနှစ်မှာ “အိုဘားမား” တက်လာတယ်။ “ဘင်လာဒင်” နောက်ကို ဆက်လိုက်တယ်။ သိပ်မကြာဘူး။ (၂)နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ “ဘင်လာဒင်” ကို အသေဖမ်းမိ သွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ? ကျွန်တော် စဉ်းစားတယ်။ ဂျော့ဘွတ်ရှ် (၈)နှစ်လောက် လိုက်ဖမ်းလို့ မမိတဲ့ “ဘင်လာဒင်” ကို “အိုဘားမား” က ချက်ခြင်းဆိုသလို ဖမ်းမိတာလဲ။
ဒီတော့ သူတို့ မွေးသက္ကရာဇ်တွေ စုဆောင်းထားတဲ့ မှတ်စုစာအုပ်ကို ပြန်လှန်ကြည့်မိတယ်။ အရင်က လုံးဝ မကြည့်မိပါဘူး ၊ အခု 9/11 (၁၀)နှစ်ပြည့်နေ့မှာ ထူးထူးခြားခြား စိတ်ဝင်စားမှုလေးဖြစ်လာလို့ ကောက်ကြည့်မိတော့ - = အိုစမာဘင်လာဒင်က – 1957 ခု၊ မတ်လ (10)ရက် နေ့မှာ မွေးတယ်ဗျ။ (၂)ခုကြွင်း တနင်္ဂနွေသား (အထွန်းဖွား)။
= ဂျော့ဘွတ်ရ်ှက – 1946 ခု ၊ ဇူလိုင်လ (6)ရက် နေ့မှာ မွေးတယ်။ (၆)ခုကြွင်း စနေသား (ပုတိဖွား)
= အိုဘားမားက – 1961 ခု ၊ သြဂုတ်လ (4) ရက်နေ့မှာ မွေးတယ်။ (၀)ကြွင်း သောကြာသား (အထွန်းဖွား)
ဒီပုဂ္ဂိုလ် (၃)ဦးရဲ့ မွေးနေ့မွေးနံတွေက “အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာ” ရဲ့ သီအိုရီတွေနဲ့ သွားပြီး ကိုက်ညီနေတာလေးကို သတိထားမိလိုက်တယ်။ ဒီလိုပါ။ “ဘင်လာဒင်” ဟာ တနင်္ဂနွေသားဖြစ်လို့ သူ့ရဲ့ “အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ” တိုင်လေးကို ချကြည့်ရအောင် - အဲဒီမှာ “ဘင်လာဒင်” က တနင်္ဂနွေသား ၊ သူ့ကို လိုက်ဖမ်းတဲ့ “ဂျော့ဘွတ်ရှ်” က စနေသား။ စနေဟာ တနင်္ဂနွေရဲ့ အမြစ်ဂြိုဟ်။ အမြစ်ဆိုတာ နင်းကြမ်းဂြိုဟ်။ တနင်္ဂနွေရဲ့ ခြေထောက်အောက်ကဂြိုဟ် ။ ဒါကြောင့် “ဂျော့ဘွတ်ရှ်” ဟာ နံနိမ့်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် “ဘင်လာဒင်”ကို မဖမ်းမိနိုင်တာလားလို့ တွေးစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ “အိုဘားမား” ကျတော့ သောကြာသား ၊ သောကြာဂြိုဟ်ဟာ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ရဲ့ “ဆပွတ်” ဂြိုဟ်၊ ဆပွတ်ဆို တာ အနိုင်ဂြိုဟ်။ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာရဲ့ သီအိုရီ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ “သူ့ကိုနိုင်လို ဆ, ကိုခို . . . ” ဆိုတဲ့ လင်္ကာလေးလေ။ ဒီတော့ သောကြာနံဟာ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး နိုင်တဲ့ နံ ဖြစ်နေလို့ “သောကြာသား အိုဘားမား” လက်ထက်ရောက်မှ “တနင်္ဂနွေသား ဘင်လာဒင်” ကို အနိုင်ရ ဖမ်းမိသွားတာလားလို့ တွေးမိပါတယ်။
ဒါလေးတွေကတော့ ဗေဒင်ပညာကို လေ့လာလိုက်စားနေသူ ၊ သုတေသနပြုနေသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ထူးခြားချက်ကလေး တွေကို ဖော်ထုတ် ယူကြည့်တာပါ။ ပြီးတော့ ၀ါသနာတူ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ပြန်ပြီးဖောက်သည်ချတာပါ။ “ပေါက်ဖော်” လို့ ပြောရင်လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ “ပေါက်ဖော်” ဆိုတာ နာမည်သာ ဆိုးတာပါ . . . ပညာရပ်တစ်ခုကို သုတေသန လုပ်သူတွေအတွက်တော့ အကျိုးရှိလှပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်ရပ်ကလေးတွေကို မှတ်သားထားပြီး နောင်လာမယ့် အလားတူ ဖြစ်ရပ်တွေကို အနီးစပ်ဆုံး ဟောကိန်း ထုတ်လာနိုင်ပါတယ်။ လေယာဉ်တွေ ပျက်ကျရင် ဘာကြောင့် ပျက်ကြရတယ်ဆိုတာကို Trace လိုက်ကြရတယ်မဟုတ်လား။ ပေါက်ဖော်ပြန် လုပ်တာပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကနေ နောက်နောင် ဒီလို အားနည်းချက်ကြောင့် လေယာဉ်ပျက်မကျရအောင် ရှောင်ကွင်းလာနိုင်ကြတယ် မဟုတ်လား။
ကဲ - ဆောင်းပါးလေးကတော့ ပြီးပါပြီ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 9/11 ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးမှာ ကွယ်လွန်သွားကြရတဲ့ “အပြစ်မဲ့ လူသား” တွေအတွက် ဆုတောင်း ပေးကြရအောင်။ တမလွန်ဘ၀သို့ ပြောင်းသွားကြပြီဖြစ်သော ကွယ်လွန်သူအားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုခဲ့ပြီးသမျှ ကောင်းမှုကုသိုလ်အားလုံးကို အမျှပေးဝေပါသည်။ ကောင်းရာသုဂတိသို့ လားကြပါစေကုန်သော်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	One comment on “#9/ 11 အမှတ်တရ နှင့် အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာ”	YoungGun on September 13, 2011 at 9:17 pm said:
ဆရာစာအရေးကြဲသွားတာ ဘာ့ကြောင့်များလဲဗျာ.. မကျန်းမာလို့လား စိုးရိမ်မိတယ်။
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,838)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,479)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,205)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,052)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,078)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,403)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,223)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,723)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,769)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,415)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,357)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,226)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,166)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,137)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,457)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,420)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,108)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,909)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,771)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,762)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,293)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,898)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,796)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,746)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,615)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,573)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,356)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,228)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,168)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,078)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
29 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.